I-Cozy Private Villa e-Istorya Forest Garden - I-Airbnb
I-Cozy Private Villa e-Istorya Forest Garden
UIstorya ungumbungazi ovelele. Indawo yengadi yehlathi etholakala e-Pan ay edolobheni laseCapiz ezungezwe izihlahla ezinhle ezinde eziluhlaza, umoya ohlanzekile, indawo yokuphumula enokuthula & ethule. Indawo yokungcebeleka iqhele ngemizuzu emi-5 kuphela kwelinye lamasonto amadala ePhilippines elibizwa ngeSta Monica Church. I-Istorya umkhosi. Indawo lapho ungagubha khona izikhathi zakho ezikhumbuleka kakhulu njengemishado, izinsuku zokuzalwa, ukuhlangana kabusha, njll. nomndeni wakho nabangane oseduze. Imisebenzi iyatholakala!
Ungakwazi ukufinyelela indawo yethu yokuzivocavoca, indawo yokubhukuda yethu, amabhayisikili futhi uthole isaphulelo sanoma yimiphi imisebenzi yethu.
Indawo yethu yokungcebeleka inekhefi ebizwa nge-Cafe Blanco enikezela ngamakhofi akhethekile, amakhekhe amnandi nezinkwa nezitsha ze-filipino ezine-twist & nemifino esanda kukhiwa engadini yethu.
Futhi sikude ngemizuzu emi-5 kwelinye lamasonto amadala e-Philippines elibizwa ngokuthi i-Sta Monica Church.
Sinemisebenzi etholakalayo efana nokwenza i-pizza ku-pizza yethu ye-oven yezitini eshiswe ngokhuni, ukuvakasha ngebhayisikili edolobhaneni lase-Pan ay ukuze sazi abalimi bethu bendawo, i-River Rafting ezungeze uMfula i-Panay kanye ne-Island Hopping eziqhingini ezincane ezizungeze i-Capiz.
Lapho sifika, sizobe sikulindile endaweni yokwamukela izivakashi yaseCafe Blanco. Sizobe sikunikeza iziphuzo zamahhala kanye nethawula elibandayo futhi sikuphelezele ukuya emakamelweni akho. Sizobe sikunikeza imenyu yokudla kanye nohlu lwemisebenzi ongase ube nentshisekelo ukuzenza.
Lapho sifika, sizobe sikulindile endaweni yokwamukela izivakashi yaseCafe Blanco. Sizobe sikunikeza iziphuzo zamahhala kanye nethawula elibandayo futhi sikuphelezele ukuya emakamel…